गोरखालाई मुर्तीकै शहर बनाउ - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखालाई मुर्तीकै शहर बनाउ
Published On : ३ बैशाख २०७५, सोमबार ०८:०२
गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ गोरखाले शनिबार बसेको आफ्नो नियमित बैठकान गुरु गोरखनाथको मूर्ती बनाउन अक्षयकोष निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यस्तै उसले एक लाख एक रुपैँयाको अक्षयकोष बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइपनि सक्यो । यस अघि पश्मिकालीमा द्रब्यशाहको चौतारा अगाडी द्रब्यशाहकै मुर्ती बनाएर पर्यटन प्रवद्र्धनमा सिँढी बनाउने काम गरिसकेको छ । गोरखाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्राकृतिक सम्पदाहरुले जति आकर्षणको काम गर्छनी, त्यत्तिनै यहाँका धार्मिक एवं ऐतिहासिक ब्यक्तिहरुको प्रतिमुर्तीले गर्छ ।
अहिले गोरखामा पृथ्वीनारायण शाह, रामशाह, द्रब्यशाहको शालिक बनिसकेको छ । गोरखा नगरपालिकाले पनि गुरु गोरखनाथको मुर्ती बनाएरै छाड्ने बताएको छ । उसले विशेनगर्चीको मुर्ती पनि बनाउने बताइरहेको छ । यसखाले कदमले नगरको मान नभई समग्र गोरखाको आर्थिकसँगै पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने पक्का छ ।
गोरखाका अन्य सरोकारवालाहरुले गोरखाका अन्य ऐतिहासिक ब्यक्तिहरुको पनि शालिक बनाउन पहल चाल्नुपर्छ । गोरखालीको आम्दानीको अर्काे स्रोत पर्यटन हुनसक्दछ । गोरखालीहरुले गोरखाको नाममा प्रचार र प्रसार गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले अब स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र संघिय सरकारको साथ लिँदै भौतिक पुर्वाधार निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
कगोरखाको पश्चिमकाली, चिल्डे«नपार्क, गोरखा दरबार, भीमसेन पार्क लगायतका ठाउँमा राष्ट्रिय विभूतिहरुको शालिक निर्माण गरेर गोरखाको पहिचान बढाउन सकिन्छ । यसले नै गोरखा र गोरखालीको समग्र पक्षलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।